फ्रिजको पानी पिउँदा के हुन्छ ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-05-28T04:46:07.747484+05:45
फ्रिजको पानी पिउँदा के हुन्छ ?
personपत्रपत्रिकाबाट access_timeअसार ३१, २०७४ chat_bubble_outline0
गर्मी मौसम सुरु भयो । गर्मीले औडाहा हुँदा अधिकांश व्यक्ति फ्रिजको चिसो पानी पिएर तत्काल आनन्द लिन चाहन्छन् । तर, पिएको केही बेरका लागि गर्मीबाट राहत दिने फ्रिजको चिसो पानी नियमित पिउँदा दूरगामी असर पर्छ । बरफ या अत्यधिक चिसो पानी पिउँदा हुने चार हानि यस्ता छन् स्
फ्रिजमा राखिएको अत्यधिक चिसो पानी पिउँदा पाचन प्रक्रियामै बाधा उत्पन्न हुन्छ । चिसो पानीले रक्तबाहिनी नली खुम्चिन पुग्छ । यसले पाचन पक्रिया गति सुस्त बनाउँछ । खाएको कुरा ठीक तरिकाले पाचन भएन भने खानामा भएका पोषक तत्व शरीरले पाउँदैन ।
पोषक तत्व नष्ट
मानव शरीरको सामान्य तापक्रम ३७ डिग्री सेल्सियस हुन्छ । जब कुनै चिसो चिज पिइन्छ तब त्यसलाई सामान्य तापक्रममा बदल्न शरीरको ऊर्जा खर्च हुन्छ । खाएको पदार्थ पचाउन र पोषक तत्व शोषणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने ऊर्जा अन्यत्र खर्च हुँदा शरीरलाई पोषक तत्व प्राप्त हुन सक्दैन ।
चिसो पानी पिउँदा श्वासनलीमा कफ बन्न जान्छ । श्वासनलीको सुरक्षार्थ हुने पत्रमा कफ जम्मा हुँदै जाँदा विभिन्न संक्रमण हुन पुग्छ । यसले घाँटी खराब हुने खतरा बढाउँछ ।
मुटुको गति कम
बरफ या चिसो पानी पिउँदा मुटुको गति कम हुने खतरा पनि रहन्छ । चिसो पानीले ‘भेगस नर्भ’ उत्तेजित पार्छ । भेगस नर्भको काम शरीरको पराधीन कामलाई नियन्त्रित गर्नु हो । यसले मुटुको गति कम गर्न मध्यस्थता गर्छ । चिसो पानीले भेगस नर्भ उत्तेजित पारेपछि मुटुको गति कम हुन थाल्छ ।
आज विश्व थाइराइड डे : के हो थाइराइड ?
साइलेन्ट हार्ट अट्याक अघि शरिरले दिन्छन् यस्ता संकेत, याद गर्नुहोस्
के हो निपाह भाइरस, कसरी बच्ने यो खतरनाक भाइरसबाट ?
हलो क्रान्तिका नायक अधिकारीको सम्झना
आठ महिनामा एक हजार ३४८ किमी सडक निर्माण
खैरो हिरोइनसहित तीन पक्राउ
देशमा कति छन तारे होटल ?
यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका तीनजनाको मृत्यु
सरकारको गतिविधि हेरेर सहयोग गर्छौंः गगन थापा
सेनालाई तयारी अवस्थामा रहन रक्षामन्त्री पोख्रेलको निर्देशन
रमादानको अवसरमा कतार एयरवेजको रात्रिभोज
मुख्यमन्त्री पौडेल दलको नेतामा निर्वाचित
गणतन्त्र दिवसमा प्रदेश ५ मा सार्वजनिक बिदा